कमजोर राजदूतको परिणाम: समाधान होइन, समस्या बताउँछन् - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने पिथौरागढबाट–लिपुलेक सडक भारतका रक्षामन्त्रीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेपनि नेपालमा तनाब सुरु भयो। कोरोना भाइरसको त्रासले बन्दाबन्दी अबस्थामा समेत काठमाडौं लगायतका ठाउँहरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारती प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिरुद्ध दर्जनौं बिरोध प्रर्दशन भए।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यलाई कालापानी विवाद समाधानका लागि भारतीय पक्षसँग चाल बुझ्ने कोसिस गरे। राजदूत आचार्यले महाराष्ट्र राज्यका गर्भनर भगतसिंह कोश्यारीसँग फोन बार्ता पनि गरे। प्रधानमन्त्री ओलीको राजदूतमार्फत बार्ताका लागि सकारात्मक सन्देश आउने अपेक्षा थियो, तर ओलीले सुन्नुप¥यो भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी रिसाएको खबर? राजदूत आचार्यसँगको फोनमा गर्भनर कोश्यारीले नेपालमा भइरहेको भारत र मोदी बिरोधी गतिबिधिले प्रधानमन्त्री (मोदी) रिसाएको र ओलीलाई सुनाउन आग्रह गरे। आचार्य र कोश्यारीको मित्रवत सम्बन्ध राम्रो छ। दुबै जना इपिजी समूहका सदस्य समेत हुन्। उत्तराखण्ड राज्यका पूर्वमुख्यमन्त्री कोश्यारी नेपालबारे राम्रो जानकार र मोदीका प्रिय पात्र पनि हुन्। कालापानी, लिपुखेक र लिपियाधुराको समाचार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरुमा प्रथामिकतामा साथ प्रकाशित भइरहेका छन्। जनस्तरको दबाबपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा बोलाएर कुटनीतिक नोट दिए। सरकारको यो कार्य प्रसंशनीय समेत छ।
अचम्म त यहाँ छ – प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएको कुरा आफुलाई थाहा नभएको र कसैले रिर्पोटिङ पनि नगरेको बताए। प्रधानमन्त्रीको यो तर्क लाजमर्दो छ। तरपनि उनी ढुक्कसँग बोले। सरकारले भारतसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउन पूर्वमन्त्री आचार्यलाई भारतका लागि नेपाली राजदूतको रुपमा दिल्ली पठाएको छ। राजदूत आचार्य भारतसँग अरुभन्दा अलिक निकट समेत मनिन्छन्। के राजदूत आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई रिपोटिङ गरेनन् त? दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासमा भातलाई निगरानी गर्ने संयन्त्र साच्चिकै कमजोर हो? मानौं दिल्ली राजदूत कमजोर भयो रे – राजदूतलेसम्म केहि थाहा पाएनन् तर दार्चुलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र अनुसन्धान के गरेर बसिरहेका छन्? प्रश्न गम्भीर छ?
राजदूत आचार्य दिल्ली दूतावास पुगेपछि आलोचनाका पात्र बने। प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय उनको काम–कारबाही प्रति पूर्ण सन्तुष्ट नभएको उनी निकट स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफुलाई नाकाबन्दी ताका समर्थन गरेकै कारण पुरस्कार दिएको चर्चा राजनीतिक बृत्तमा नभएको पनि होइन। राजदूत आचार्य स्वायम् सदस्य रहेको इपिजी प्रतिवेदन समेत अहिलेसम्म बेबारिसे छ।